Firefox, Chrome, Edge uye Safari haichazotsigira TLS 1.0 uye TLS 1.1 | Linux Vakapindwa muropa
Firefox, Chrome, Edge uye Safari haichazotsigira TLS 1.0 uye TLS 1.1
Como chikamu chekufamba kwakabatana pakati pemazita mana makuru kwazvo muhunyanzvi, iyo yekare chengetedzo protocols TLS 1.0 uye 1.1 ichabviswa muSafari, Edge, Internet Explorer, Firefox uye Chrome muna 2020.
Apple, Microsoft, Mozilla, neGoogle vakabatana kuti vabvise internet yeaya ma protocols ekare uye asina kunaka, vachicherekedza kuti vanhu vazhinji vatamira kuTLS 1.2, kana isiri TLS 1.3.
Kunyangwe 94 muzana yemasaiti atoenderana neshanduro 1.2, nguva yekukanganisa pamwedzi gumi nesere inotevera ichapa munhu wese mukana wekuwana.
Vagadziri vemabhurawuza Firefox, Chrome, Edge neSafari vakayambira nezve kupera kwekutsigirwa kweiyo TLS 1.0 uye TLS 1.1 protocols:
MuFirefox, TLS 1.0 / 1.1 rutsigiro rwunomiswa munaKurume 2020, asi maprotocol aya anozoremerwa kare mukuyedzwa uye neshanduro dzehusiku.
Mu Chrome, TLS 1.0 / 1.1 rutsigiro rwunomiswa kubva paGoogle Chrome vhezheni 81, inotarisirwa muna Ndira 2020.
Ndichiri muGoogle Chrome vhezheni 72, iyo ichaburitswa muna Ndira 2019, painovhura nzvimbo neTLS 1.0 / 1.1, yambiro yakanangana nezvekushandisa yechinyakare vhezheni yeTLS icharatidzwa. Zvirongwa zvinoita kuti zvikwanise kudzorera rutsigiro rweTLS 1.0 / 1.1 zvicharamba zviripo kusvika Ndira 2021.
Mu Safari webhurawuza uye injini yeWebKit, rutsigiro rweTLS 1.0 / 1.1 rwuchamiswa munaKurume 2020.
Ndichiri mu Microsoft Edge web browser uye Internet Explorer 11, kubviswa kweTLS 1.0 neTLS 1.1 kunotarisirwa muhafu yekutanga ya2020.
Tsananguro yeTLS 1.0 yakaburitswa munaNdira 1999. Makore manomwe gare gare, iyo TLS 1.1 inogadziridzwa yakaburitswa pamwe nechengetedzo zvinowedzerwa zvine chekuita nechizvarwa chekutanga mavheji uye zvinowedzera padding vectors.
Iye zvino, iyo Internet Engineering Task Force (IETF), iyo inosanganisirwa mukugadzirwa kweinternet mapurani uye maprotocol, Iyo yatove yakaburitsa dhizaini dhizaini iyo inoshandura iyo TLS 1.0 / 1.1 protocols isingachashandi.
Mushure memakore makumi maviri mairi ichakamira iripo chimwe chezvikonzero icho IETF inotarisirwa (Injiniya Yeinternet Inoshanda) vasingabvumire zviri pamutemo zvibvumirano gare gare gore rino, kunyange hazvo pasina chiziviso chakaitwa parizvino.
Ruzhinji rwevashandisi uye maseva vatoshandisa TLS 1.2+
Iyo muzana yezvikumbiro uchishandisa TLS 1.0 pawebhu ndeye 0,4% yevanoshandisa Chrome uye 1% yevashandisi veFirefox.
Pamasiti makuru e2 mamirioni akayerwa neA Alexa, chete 1.0% inongogumira kuTLS 0.1 uye 1.1% - TLS XNUMX.
Zvinoenderana neCloudflare manhamba, ingangoita 9,3% yezvikumbiro kuburikidza neCloudflare yemukati meseji yekuendesa inoitwa uchishandisa TLS 1.0. TLS 1.1 inoshandiswa mu0,2% yematambudziko.
Zvinoenderana nekambani yeSSL data sevhisi Pulse Qualys TLS 1.2 protocol inotsigira 94% emawebhusaiti, ichibvumidza chengetedzo yekubatanidza.
“Makumi maviri emakore inguva refu kuti tekinoroji yekuchengetedza irambe isina kuchinja. Kunyangwe isu tisingazive nezvekukanganiswa kwakanyanya nekuvandudzwa kwedu kweTLS 1.0 neTLS 1.1, kune zviitwa zvechitatu-bato, "akadaro Kyle. Pflug, maneja wechirongwa chepamusoro paMicrosoft Edge.
Dhata reMozilla rakaunganidzwa kuburikidza neteremetry pa Firefox inoratidza kuti chete 1.11% yekubatana kwakachengeteka kwakagadzwa uchishandisa iyo TLS 1.0 protocol. KweTLS 1.1, nhamba iyi iri 0.09%, yeTLS 1.2 - 93.12%, yeTLS 1.3 - 5.68%.
Idzo nyaya huru muTLS 1.0 / 1.1 kushomeka kwekutsigirwa kwezvimedu zvemazuva ano (semuenzaniso ECDHE neAEAD) uye chinodikanwa chekutsigira zvinyorwa zvekare, kuvimbika kwazviri kubvunzwa padanho razvino rekuvandudza komputa (semuenzaniso, kutsigira TLS_DHE_DSS_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA inodiwa kuongorora).
Tsigiro yemagariro algorithms yakatotungamira pakurwiswa senge ROBOT, KUSIMBIDZWA, CHIKARA, Logjam, uye FREAK.
Nekudaro, idzi nyaya dzaive dzisiri dzekunetseka kweprotocol uye dzaivharwa padanho rekushandisa kwavo.
Iwo maTLS 1.0 / 1.1 mapuroteni anoshaya njodzi dzakakomba dzinogona kushandiswa kuita kurwisa kunoshanda.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Firefox, Chrome, Edge uye Safari haichazotsigira TLS 1.0 uye TLS 1.1